ရသစာပေ – Cele Myanmar
Home > ရသစာပေ
သူအလုပ်ပြုတ်နေကြောင်းသူ့ ဇနီးကို မပြောပြရက် ခဲ့ပါဘူး
မနက်ခင်းတိုင်းမှာ ပုံမှန်လိုပဲ မနက်စာစားပြင်ဆင်ပြီး သူ့ဇနီးလေးရဲ့ ပါးကိုနမ်းပြီး “ချစ်လေး ရေ အလုပ်သွားပြီ နော် ညနေမှပြန်တွေ့ ကြမယ် ကွယ် ”လို့ နှုတ်ဆက်တယ် သူ့ဇနီးလေးက လည်းပြန်နမ်းပြီး“စိတ်မကစားနဲ့ နော် အလုပ်ကို ဂရုတစိုက်လုပ် ပါနော် ” ပြောတယ်။
Categories ဗဟုသုတ/ရသစာပေ	Comments: 0
ဂျူတီမချိန်းခင်မှာပဲ ပြတ်ကျနေတဲ့ ဓာတ်ကြိုးကိုဖြတ်ဖို့ ဓာတ်တိုင်ပေါ်ကို သူတက်လိုက်ပါတယ်။ ခါးမှထိုးထားတဲ့ ပလာယာနဲ့ ဖြတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတုန်းမှာပဲ တုန်ခါနေတဲ့အထိအတွေ့နဲ့ ဓာတ်လိုက်ပြီး မြေပြင်ပေါ်ကို ပြုတ်ကျသွားပါတယ်။
Categories ဗဟုသုတ/ရသစာပေ/ကြားသိရသမျှ	Comments: 0
ဖုန်းဆိုင်​ တစ်​ဆိုင်​သို့​လူတစ်​​ယောက်​ ဝင်​လာပြီး ​မေးသည်​
” ​မောင်​ရင်​ – ​စွေ​စောင်း ရှိလား . . . ?”
” ဘယ်​က ​စွေ​စောင်းလဲ — . . . ?ကျ​တော်​တို့ဆီမှာ​စွေ​စောင်း ဆိုတဲ့လူ တစ်​​ယောက်​မှ မရှိဘူး ”
Categories ရသစာပေ	Comments: 0
တစ်ခါက ရွာတစ်ရွာမှာ သမီး ၃ ယောက်မွေးထားတဲ့ အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်ရှိသတဲ့။ အဲဒီရွာမှာပဲ မြို ကရောက်လာတဲ့ အင်မတန်အပြောကောင်းပြီး အလုပ်မလုပ်ပဲ လိမ်ညာစားသောက်နေတဲ့ ပတ်ချွဲနှပ်ချွဲ လူရှုပ်တစ်ယောက်လည်း ရှိသတဲ့။
မိန်းမတစ်ယောက် ညည်းညူသံတွေ ကြားရတဲ့ ဟိုတယ်​အခန်းနံပါတ်​ ၃၉
ဖုန်းတွေမပေါ်သေးတဲ့ခေတ်အပြာကားတွေကို ဖုန်းထဲမှာ ကြည့်လို့မရတဲ့ ခေတ်မှာပေါ့
အရပ်မြင့်မြင့် အသားဖြူဖြူ လူရည်သန့် လူငယ်တျောက် ဟိုတယ်ထဲကိုဝင်လာတယ်။
ကောင်တာရှေ့ရောက် ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် သူဌေးကိုမေးတယ်
သူကတော့နောင်တော်ကြီးမင်းလက်ထက်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ဥဒိန်ကျော်ခေါင် ဆိုသူပါ။ နောင်တော်ကြီးမင်းက ဇင်းမယ်ကိုချီတက်တိုက်ခိုက်စေခဲ့တဲ့ တပ်မှာပါသွားခဲ့ပြီး လမ်းခရီးမှာ သေဆုံးခဲ့သူပါ။သေဆုံးပြီးတဲ့နောက် တစ္ဆေဖြစ်ခဲ့ပြီး တစ်ညနောင်တော်ကြီးမင်း စက်တော်ခေါ်နေစဉ်မှာ မင်းကြီးခြေထောက်ကို လှုပ်နိုးခဲ့ပြီး– မိမိသည်လမ်းတွင်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်
မန္တလေးမြို့ အနှစ် ၁၆၀ ပြည့်
မင်းတုန်းမင်းသည် မြို့ဧရိယာကျဉ်းသော၊ အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာရန် လွယ်ကူသော အမရပူရမြို့ နန်းတော်ကို ခွာကာ မန္တလေးမြို့သစ်ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုကြသလို နိုင်ငံခြားသား အကဲခတ်များကမူ သွေးထွက် သံယို များသည့် နေရာ၊ အင်္ဂလိပ်ကို စစ်ရှုံးသည် နေရာ ဆိုသည်အတွက် ပြောင်းရွေ့ခြင်းဟု ယူဆသည်။
ကမ္ဘာကျော် ပန်းပုပညာနဲ့ ရုပ်လုံးပညာရှင် မိုက်ကယ်အိန်ဂျလို အကြောင်း
မိုက်ကယ်အိန်ဂျလိုဟာ အီတာလျံ လူမျိုးတယောက်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့အနုပညာသမိုင်းမှာတော့ ထိပ်တန်းစာရင်းဝင် အနုပညာရှင်တယောက်ပါ။ သူဟာ ပန်းချီ၊ ပန်းပု၊ ဗိသုကာနဲ့ ကဗျာတွေမှာလည်း နှံ့စပ်ကျွမ်းကျင်သူပါ။ အီတလီနိုင်ငံမှာ စတင်ခဲ့တဲ့ Renaissance ခေတ်လို့ခေါ်တဲ့ ဉာဏ်သစ် အရေးတော်ပုံခေတ်မှာ မိုက်ကယ်အိန်ဂျလိုဟာ အထူးထင်ရှားသူ တယောက်ပါပဲ။
Categories ရသစာပေ/အနုပညာ	Comments: 0
ကမ္ဘာကျော် ဂုတ်ထိပ်တံတားအတွက် ဘဝကို ပေးဆပ်ခဲ့ရသူ (သို့) စစ်သားဟောင်းကြီး ဦးလှမိုး
ပေ ၂၀ ပတ်လည် မြေစိုက်အိမ်တစ်လုံးရဲ့ စောင်းတဲထဲမှာ အသက် ၇၀ ကျော်အဖိုးအိုတစ်ဦး လှဲပြီး အိပ်နေတယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ် သာမန်လူတွေလို ကိုယ်လက်အင်္ဂါ အပြည့်စုံမပါဘူး။ မျက်လုံးတစ်ဖက် ၊ ခြေထောက်တစ်ဖက် နဲ့ လက်နှစ်ဖက် မပါတဲ့ မသန်စွမ်းအဘိုးအို တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
Categories ရသစာပေ/သတင်း/ကြားသိရသမျှ	Comments: 0